Home News XOG:-Ahlusunna oo qaab Cusub u wajahaysa Doorashada Galmudug
XOG:-Ahlusunna oo qaab Cusub u wajahaysa Doorashada Galmudug
Ahlusunna Waljameeca oo tiro xildhibaano ah ku leh Baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa hada caqabad ku noqotay habsami u socodka doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa ee la filayo in dhawaan ka dhacdo Dhuusamareeb.
Xildhibaano ka tirsan Ahlusunna xubina ka ahaa guddiga doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa qaadacay hogaan ay guddigaasi yeesheen, waxa ay sidoo kale Xildhibaanada Ahlu Sunna diideen kasoo qeyb galka kulamada Baarlamaanka.
Sida aan wararka ku heleyno Ahlusunna ayaa hada bilowday gor gortan cusub si ay u aqbalaan doorashada Madaxweynaha Galmudug qeybna uga noqdaan Xildhibaanadooda kulamada Baarlamaanka.
Hogaanka Ahlusunna ayaa la sheegay in ay dalbadeen in la sameeyo Madaxa Xukuumada Galmudug sidoo kale la siiyo, waxa ay sidoo kale dalbadeen hadii taasi dhici weyso in Galmudug yeelato Madaxweyne kuxigeen labaad lana siiyo kooxdooda.
Gorgortankan Cusub ee la timid Ahlusunna ayaa u muuqata mid ay ku abuureyso carqalad hor leh oo soo wajaheysa maamul u dhisida Galmudug, waxa ayna kooxdan ku adkeesaneysaa hadii aan rabitaankeeda la tix galin doorasho kale qabanayaan.